I-AASraw I-Nootropics abaxhasi bee-series-powderers-AASraw powder
/ iimveliso / INootropics powder
SiyiNootropic powders abaphakeli bee powder, iiNootropics powders powder ukuthengiswa, Njengoko sithembisile, zonke zethu zeNootropics powders powder zihlambulukileyo zingekho ngaphantsi kwe-98%.
I-Nootropics powder, eyaziwayo njengezixhobo ezizizisayo kunye nabaphuculisi bokuqonda, izidakamizwa, izongezelelo kunye nezinye izinto eziphucula umsebenzi wokuqonda, ngokukodwa kwimisebenzi yolawulo, imemori, ubuchule, okanye iinjongo, kubantu abaphilileyo.
Ukusetyenziswa kwezidakamizwa zokuphuculwa kwamagama kunye nabantu abangabonileyo ngokungabikho kwenkcazo yezokwelapha ngenye yeengxoxo ezixutyushwa kakhulu phakathi kweengcali zesazi, izifo zengqondo kunye namagqirha anika imiba eninzi, kuquka ukuziphatha kunye nokunyaniseka kokusetyenziswa kwazo iziphumo, kunye nokuphazamiseka kwemithi yesigxina kwimisebenzi engeyiyo imimiselo, phakathi kwabanye. Nangona kunjalo, ukuthengiswa kwamazwe ngamazwe okuxhaswa kwamakhomitha okugqithiseleyo kukudlula i-US $ 1 yezigidigidi kwi-2015 kwaye ukufunwa kwehlabathi jikelele kule mihla kuqhubeka ngokukhawuleza.
I-Nootropics ipowders powder - ngamanye amaxesha abizwa ngokuba yimichiza efanelekileyo-yinkampani eyenza ubuchopho busebenze. Ziba yindlela eyaziwayo yokunika ingqondo yakho ingakumbi. Ngokombiko omnye weTelegraph, ukufikelela kwi-25% yabafundi abahamba phambili kwiiyunivesithi zase-UK bathathe isigunyaziso semithi ye-drug modafinil, kunye nabasebenzi baseCalifornia baqalisa ukuzama yonke into esuka ku-Adderall ukuya kwi-LSD ukunyusa ubuchopho babo kwi gear ephezulu.
Ndiye ndazuza ngokuxhamlayo kwi-Nootropics powders powder ukususela kwi-1997, xa ndijamelene nokusebenza kwengqondo kwaye ndalela i-$ 1000 ixabiso lemichiza ehlakaniphile esuka eYurophu (indawo kuphela apho unokufumana khona ngexesha). Ndiyakhumbula ukuvula ipakethe engabonakaliyo ebomvu kwaye ndibuze ukuba ngaba amayeza kunye nezinto zendalo ziza kuphucula ubuchopho bam.
Benza, kwaye ndibe ngumdlali omkhulu wongcungcutheko oluthile olusukelayo.
Ndiyaqaphela abanye, nangona kunjalo. Ingxaki ngokusebenzisa i-blanket term efana ne "Nootropics powders powder" kukuba ulahla zonke iintlobo zezinto kunye. Ngokwenene, unokuthi i-caffeine kunye ne-cocaine zombini i-Nootropics powders powder, kodwa ayilingana. Ngeendlela ezininzi zokuphucula umsebenzi wengqondo yakho, ezininzi zazo ezinobungozi obukhulu, kubaluleke kakhulu ukujonga kwi-Nootropics powders powder kwiimeko ezithile ngamatyala.
I-1) I-Modafinil yindawo eyaziwayo kakhulu neyaziwayo ngokubanzi yeNootropics. Kwaye ngenxa yezizathu ezifanelekileyo: kudala isimo sekhono lokuqonda, esichazwe ngokuxinwa, ukuvuka, nokugxila. Ngenxa yoko, isetyenziselwa ngabadlali beSpredishithi seZiko loMhlaba, abadlali behlabathi kunye nabaqhubi beenqwelo-moya ze-US.
I-2) I-Phenylpiracetam yinguqu eguqulelwe iPiracetam, i-original Nootropics powder compound. Ngokufakelwa kweqela lePhenyl, i-Phenylpiracetam ngamaxesha e-10 anamandla, kwaye ikhatywe ngokukhawuleza. Oku kuvumela ukuba ixabiso elincinci libonelele ngokukhawuleza, ukuphakamisa ixesha elide ukuqonda nokuvelisa.
3) I-Armodafinil Iphucula iMemori. I-Armodafinil i-analog ku Modafinil. Iphucula imemoridi yexesha elide kwaye ikhuthaza ukuvuka kwizigulane ezinobuthongo obunzima obunzima bokuphelisa ubuthongo bokulala nokuguquka kwengxaki yokusebenza.
4) I-Piracetam Iphucula iMemori. I-Piracetam ithucule ukufumana imemori yexesha elide / elifutshane kwi-60 dyslexic boy.
I-Piracetam ibonise ukuphucula okukhulu kwimemori yengcaciso emfutshane kunye neyengeyona imfutshane kunye nokuqwalaselwa kwizigulane ezithotywayo.
Ukwelashwa okungapheliyo (250 mg / kg) kakhulu kwandisa imemori yokusebenza kunye nokwandiswa kwememori (+ citicoline) kwiimichiza ezine-amnesia ezibangelwa yiziyobisi.
5) I-Oxiracetam Iphucula iMemori. Kwizigulane ze-Alzheimer okanye ezininzi eziphazamisekile, i-800 mg oxiracetam kabini ikhumbuze imemori, kungekho mqondiso wokunyamezela. Nangona kunjalo, iimvavanyo ezithile zengqondo zibalaseleyo ngaphezu kwesiseko emva kokulandelwa kwexesha elide.
Kubantu, i-oxiracetam ibonisa ukuphucula okukhulu kwimemori efana ne-piracetam. Kwiengcongolo kunye neegundane, i-oxiracetam ithuthukise imemori kunye ne-piracetam. Ukongeza, kwaphucula nokukwazi ukufunda.
6) I-Pramiracetam Iphucula iMemori. I-Pramiracetam ithengiswa njengonyango lweememori kunye nokuphazamiseka kwabantu abakhulileyo abaneengqondo ezikhubaza izifo kunye nokugula komzimba. I-Pramiracetam inempembelelo ebalulekileyo ekuphuculeni imemori yezigulane ngokungabi ncitshiswa kwe-oksijini kwingqondo.
7) I-Phenylpiracetam / iPhenotropil Iphucula iMemori. Iinkqubo ze phenylpiracetam / phenotropil azikho icacile kliniki kodwa kufuneka zifanane nezinye iziyobisi kumalungu e-racetam.
Ukuthenga ama-powders amachiza angama-Smart, zama ukuqinisekisa ukuba i-HPLC ixela kunye ne-COA kunye namanye amaxwebhu ukuqinisekisa ukuba yiyona ingqiqo kunye namgangatho ophambili.
Ukubonisa 1-8 kweziphumo 13